iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo #924 by mickod88
Evening Evening Simmers !!
Ngaba ilungu kwiRiooooo ngoku malunga neenyanga ze-6, ekugqibeleni ndijikeleze ukuba ndizenzele njengokuba ndingekho kude ngoku ukuze ndifumane ixesha elihle le-P3D phantsi kwebhanti lam kwakhona!
Igama lam nguMick, kwaye ndivela eLossiemouth eScotland, okwangoku nje ndikhonza njenge-Avionics Technician ne-RAF. Ukujonge phambili ekufundeni okungakumbi malunga ne-P3D ukusuka kwabanamava kwaye ninethemba lokuba ndiza kudlulisela ulwazi lwam kwezinye iindwendwe kwixesha elizayo.
iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo - iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo #925 by rikoooo
Siyakwamkela kwiforamu, siyabonga ngokuzisa.
Ndiyathemba ukuba uya kulonwaba kule forum, lonke iqonga elitsha kwaye lifuna izinto ezithile ngoko nceda unganqikazi ukuthumela apha uze ulethe ulwazi lwakho oluxabisekileyo kwabanye.
Uhlobo lokugqibela: 1 unyaka we-5 inyanga edlulileyo rikoooo.
iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo #926 by Gh0stRider203
Aye, okwesibini oko! Siyakwamkela, kwaye siyabonga ngenkonzo yakho!
Ixesha ukwenza page: 0.303 imizuzwana